Qeybtii Sadaxaad Dhacdo Aad Iyo Aad U Xiiso Badan Kaana Yaabin Doonto In Badan ‘Cajalkii Fiidiyoowga’..!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Qeybtii Sadaxaad Dhacdo Aad Iyo Aad U Xiiso Badan Kaana Yaabin Doonto In Badan ‘Cajalkii Fiidiyoowga’..!!
Published: January 7, 2015, 12:00 am
| Updated: January 6, 2015 9:54 pm
(1) Comments Sheekadaan xiisaha badan hadii aay ku dhaaftay qeybaheedii hore HALKAAN RIIX OO AKHRISO
Wax uu daba socdo oo uu kolba hadal macaan kadaba yidhaa, waxa ay soo gaadhay jaamacaddi. May eegin manay la hadale jaamacaddeedi ayay iska gashay, iyada oo casharaddeedii iska baranaysa ayuu kolba niyadda kaga soo dhacayaa markasay is waydiinaysaa “taloow qofkani muxuu ahaa, ma jin la guu soo diraa mise waa qof caadiya”?
Waxa ay gaadhay xilligii rawaxaadda, iriidda jaamacadda hadday dhaaftay haddana waa isagii, quruxbadanaa, qaab wanaagsanaa, qawl macaana. Waa cadadiiye durba waxa uu bilaabayaa in uu hawshii haasawaha halkii ka bilaabo.
“Gobaad maxaad ii rumaysan la’dahay! maad I arkayn inta cisho ee aan kugu soo noqnoqonaayo, miyad I rumaysan la’dahay walaal, waxa aan ahay wiil kula dhashay ee ii dhiig nax oo ila hadal waan ku jecelahaye.” Gobaad intaa markay maqashay ayaa ilayn waa hawen oo qalbi nugaylka waa lagu ogaaye ay u damqanaysaa. Hase ahaate wali hadal umay dallicine uurka ayuunbay uga naxday.
Markii ay gurigii timi ee ay maryihii iska bixisay in ay nasatana damacsantahay ayuu Telefoonkii soo dhacayaa!! Way qabanaysaa Hellow!! Waa wiilkii muddadanba daba socday ee ku daalay daydaygeeda. Judhaba waxa uu bilaabaya hadal naxariis iyo jacayl kicina. Waxa uu u sheegaya in uu jecelyahy, sidoo kale uu yahay guur doon hanti haysta oo raba in uu guursado sida ugu dhakhsaha badan. Sidaa awgeed gabadha uu doortay ee uu rabaana waa Gobaad iyada oo uu helo mooye nololiba uma dhadhamayso.
Gobaad iyada oo qalbigeedu soo dibcaayay markii horeba, haddana markay maqashay weedhahan afkiisa ka soo burqanaaya way la hadashay isla markana waxa ay ogolaatay in ay is bartaan.
Farxaddiisiba waa maanta, Gobaad ayaa ogolaatay, aad ayuu u riyaaqsan yahay. Waxa uu gudo galayaa habkii iyo hannaankii uu qalbigeeda ku hanan lahaa, kalsoonina uu ugu abuuri lahaa.
Waxa uu la soo hadlayaa wakhtiyada ay fursadaha u hesho, way wada hadlayaan aadna way iskugu faraxsan yihin. Waxa ay bilaabeen nolol cusub waxa ay wadaageen hasaawe darandoorriya.
Gobaad awal hore jaamacadda lugaheeda ayay ku tagi jirtay kagana iman jirtay, hadda se maya. Waxa lagu geeyaa gaadhi waxaana lagaga soo qaada gaadhi oo wiilkii ay is barteen ayaa u diidayba in ay lugayso. Abbaheed ma’oga Gobaad hawshan ay bilawday, haddu ogaado taloow maxaa dhacaya? Mooyi kollay wax aanay raalli ka ahayn oo malaa waa loo diidayaa. Sidedaba habluhu marka ay shukaansi iyo sheeko bilaaban uma sheegaan reerkooda oo way ka qariyaan, iyana waa sidii oo kaba sii daran, waayo waxa ay joogta dhul carbeed oo aan wiilka iyo gabadhu isba arki karin.
Haddaba si aan loo ogaan ayaa gaadhiga guriga kama hor raacdo’e waxa ay ka raacdaa ka gana soo degtaa meel in doora u jirta aqalkooda oo aan la arkayn.
Ayaamuhuu iftiin badanaa, Gobaad way faraxsantahay, waxa ay isu diyaarinaysaa guurkeeda iyo guri gaynteeda oo ay filayso in ay dhawaan dhacaan.
Lasoco Qaybta Sadaxaad Iyo Kobciye.Com
W/Q Nada Yuusuf Cumar.
« Warbixinta Ka HoreysayDood Cajiib Ah Oo Dhex Martay Jaceyl Midka Ugu Xaasidsan Iyo Godadle ‘Akhriso Oo Arag Dooda Jaceylka Isbuuca’..	Warbixinta Xigto »Akhriso Tallooyin Kuu Sahlayo Iney Bulshada Ku Jeclaadaan Adna Aad Ku Noolaato Nolol Ku Dhisan Farxad Iyo Jaceyl.	One Comment : Qeybtii Sadaxaad Dhacdo Aad Iyo Aad U Xiiso Badan Kaana Yaabin Doonto In Badan ‘Cajalkii Fiidiyoowga’..!!
xilwa says:	January 7, 2015 at 1:54 pm	Dadkaan somali miyaa fadlan noosoo sheega qeybta afaraad kusoo sheega